Amboradara 'Aerial' hanehoana fijerin'ny vorona ny ambanivohitra anglisy | Famoronana an-tserasera
fa fahaizana amboradara lehibe hamoronana ireo sanganasa 'aerial' ireo toy ny nalaina avy tamin'ny drone nanidina teny ambanivohitra anglisy izy ireo.
Raha ny marina, ity fomba fijery nomena ireo amboradara ireo dia afaka mivadika ho faribolana kely izay mendrika hotononina ary mametraka antsika eo alohan'ny mpanakanto Victoria Rose Richards, ary mpanao amboradara matihanina izy; ary ny fahaizany mampiseho izany amin'ny talentany.
Ny marina izay navelany hisokatra ny vavantsika raha jerena voalohany ny iray amin'ireo amboradara voalohany nataony, ary amin'izany dia ahitanao tsara ny fomba fijery an'habakabaka an'io ambanivohitra anglisy io. Raha ny marina, ity manam-pahaizana momba ny peta-kofehy ity dia nanamboatra singa 35 manokana sy tsy manam-paharoa haneho amintsika an'io karazan-jeografia io miaraka amin'ireo maitso sy ireo sehatry ny loko rehetra.
Peta-kofehy feno antsipirihany izay afaka jerentsika ny maso mijery ny asa izany dia ao ambadiky ny ala, renirano na saha malalaka tsirairay izay ahatsikaritra ny tanan'ity mpanao peta-kofehy ity.
Manoro hevitra anao izahay handalo ho an'ny Instagram for fantaro ny ambin'ny peta-kofehiny mifandraika amin'izany ambanivohitra anglisy izany ary izay toa 'mason'ny vorona' na avy amin'ny drone. Efa taona vitsivitsy lasa izay no nizaranay ny asan'ny artista mifandraika amin'ny amboradara ary izany no izy Chloe Giordano ilay nanaitra anay tamin'ny asany.
Mety hanome hevitra momba ny tsirairay avy aminao izahay amboradara an'ireo sombiny 200 mahery ireo izay anananao ao amin'ny kaontinao Instagram ary hitantsika fa nahafinaritra vitsivitsy fotsiny. Ireo rahona landihazo izay mahavita mamorona ny fahatsapana ho avo loatra hamela antsika amin'ny toerana tsara tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fiheverana ireo amboradara 'an'habakabaka' ambanivohitra anglisy ireo